Serbia: Ny Fifidianana Filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Desambra 2018 15:20 GMT
Hifanandrina mandritra ny fihodinana faharoa hatao ny 03 Febroary ireo mpanao politika roa ireo. Raha ny momba ireo mpifaninana hafa izay nahazo ny 5 isan-jato tamin'ireo vato kosa, toy izao ny filaharany: Velimir Ilic (Serbia Vaovao) – 7,6 isan-jato, Milutin Mrkonjic (Antoko Sosialistan'i Serbia) – 5,6 isan-jato, Cedomir Jovanovic (Antoko Liberaly-Demokratika) – 5,4 isan-jato.
Araka ny voalazan'ny Ivotoerana ho an'ny Fifidianana Malalaka sy ny Demokrasia (CESID), hazakazaka hifanety sy tena hahaliana io fihodinana faharoa amin'ny 03 Febroary io. Nilaza ny tale mpanatanteraka ao amin'ny CESID, Zoran Lucic, fa mety hiandrandra “fitsapankevibahoaka iray hafa” i Serbia ny 03 Febroary:
Ampoizina hirotsaka ho an'i Nikolic ny ampaham-bato betsaka avy amin'i Mrkonjic. Antenaina hanohana an'i Tadic kosa ireo mpanohana ny LDP (Jovanovic). Ny fanontaniana goavana dia ny hoe: iza no hahazo ny vaton'i Velimir Ilic. Asehon'ny fanadihadianay fa hahazo vato iray i Nikolic isaky ny vato telo azon'i Tadic. Hahaliana ny hijery izay hataon'ireo mpifidy tsy nandray anjara tamin'ny fihodinana voalohany – firy no handray anjara ary iza no hotohanany. Hiankina amin-dry zareo ny voka-pifidianana.
Tsy nanadino ny namakafaka sy naneho ny heviny momba ity lohahevitra ity ireo bilaogera Serbiana. Izao no nosoratan'ny roa tamin-dry zareo.
Nanoratra ity manaraka ity ny Gazety Mpivoaka Isan'andro ao Belgrade, Blic, ny 22 Janoary:
Raha te hahazo ny fe-potoana fitondrana ho an'ny filoham-pirenena manaraka ny Lalàmpanorenana vaovao ao Serbia (rohy maty) ny Filoha Serba mitondra amin'izao fotoana, Boris Tadic, tsy maintsy mifanaraka amin'ny mpitarika ny [DSS] sy ny Praiminisitra amin'izao, Vojislav Kostunica izay hatreto dia tsy namoaka ‘lazambidy’ ho an'ny fanohanana ny mpitarika ny [DS] anatin'ny hazakazaka…
Manome fanadihadiana sady mampihomehy no mampalahelo i Dusan Maljkovic (bilaogy B92, 21 Janoary):
Tsy manohana an'i Boris Tadic i Cedomir Jovanovic (satria ny antokon'i Tadic no mpiara-mitantana amin'ny Antoko Demokratikan'i Serbia anatin'ny governemanta Serba).
Ireo izay tsy manohana an'i Tadic, manohana ho azy an'i Nikolic. Noho izany, manohana an'i Tomislav Nikolic i Cedomir Jovanovic.
Tsy manohana an'i Boris Tadic i Velimir Ilic (nanambara izy fa ho resy amin'ny fifidianana i Tadic).
Ireo izay tsy manohana an'i Tadic, manohana ho azy an'i Nikolic. Noho izany, manohana an'i Tomislav Nikolic i Velimir Ilic.
Tsy manohana an'i Boris Tadic i Milutin Mrkonjic (satria manambany ny Antoko Sosialista Serba i Tadic).
Ireo izay tsy manohana an'i Tadic, manohana ho azy an'i Nikolic. Noho izany, manohana an'i Tomislav Nikolic i Milutin Mrkonjic.
Manohana an'i Marija Serifovic [nandresy tamin'ny Fifaninanana Mihira Eurovision] i Boris Tadic.
Manohana an'i Tomislav Nikolic i Marija Serifovic.
Noho izany, manohana an'i Tomislav Nikolic i Boris Tadic […]